Inowanikwa beta 2 shanduro dzevanogadzira watchOS 5.2 tvOS 12.2 | Ndinobva mac
Zvakare inowanikwa mune yekuvandudza beta 2 shanduro dzeWOSOS 5.2 uye tvOS 12.2
Pamusoro peiyo beta 2 vhezheni ye macOS 10.14.4 yakaburitswa yevanogadzira maminetsi mashoma apfuura, iyo Cupertino kambani yakaburitsa iyos beta shanduro dzeIOS 12.2, watchOS 5.2, uye tvOS 12.2. Mune idzi shanduro chinhu chekutanga chatinogona kuona ndechekuti gadziriso inogadziriswa, kugadzirisa mune kugadzikana kwesystem uye nekuvandudza kwekuchengetedza zvinowedzerwa.
Semazuva ese Apple haikwikwidze nhau dzinoverengerwa mune idzi beta vhezheni dzevagadziri uye nekudaro hazvisi pachena kana izvo zvitsva zviitwa zvakaenzana neizvo zveiyo vhezheni yapfuura kana paine shanduko. Zvewatch uye zveApple TV shanduko idiki uye ndezvekuti dzinoshanda chaizvo mushanduro iyi yazvino yepamutemo yakaburitswa kune wese munhu mavhiki mashoma apfuura, ini ndingatoti inotsvedza pane zvishandiso zvekare.
Pakutanga zvinoita sekunge hapana shanduko dzinoonekwa mushanduro idzi saka isu tinoenderera neruzivo rweAirPlay 2 paTV, kuvandudzwa kweStock Market app ye macOS uye zvimwe zvishoma. Dzimwe nhau dzakaburitswawo mushanduro beta 1 yeIOS nekuuya kwe "Hei Siri" yeAirPods, asi kazhinji shanduko dzinooneka shoma.
Saka tichave takamirira kudzamara vagadziri vasvika pabasa votiudza kana paine chero nyaya mukodhi yedzidziso idzi nyowani dzeMacOS, iOS, tvOS uye watchOS. Apple iripowo panguva iyoyo izvozvi umo nhau dzakakosha kana dzakatanhamara dzichachengetwa kuwedzera mumashanduro aJune paWWDC, asi ivo havamire kumutsiridza yavo vhezheni ne ruzivo pamusoro pekuchengetedzwa kwese kana kugadzikana kweiyo OS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Zvakare inowanikwa mune yekuvandudza beta 2 shanduro dzeWOSOS 5.2 uye tvOS 12.2
WidsMob, yakazara kwazvo uye inonzwisisika mufananidzo muoni
Apple inoburitsa yechipiri beta ye macOS Mojave 10.14.4 yevagadziri